Shirkad Diyaaradeed Oo Ku Xadgudubtay Dad Muslimiin Ah | Aftahan News
Shirkad Diyaaradeed Oo Ku Xadgudubtay Dad Muslimiin Ah
Hargeysa, (Aftahannews)-Waaxda gaadiidka ee dalka Mareykanka ayaa ganaax lacageed oo gaadhaya $50 kun oo doolar, dul dhigtay shirkadda Delta, ka dib markii ay ku xadgudubtay qaar ka mid ah rakaab saarnaa diyaaraddeeda oo Muslimiin ah.
Waaxda gaadiidka dadweynaha ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in shirkadaas ay ku xadgudubtay sharciga, waxayna ku amartay in Delta ay shaqaalaheeda siiso tababar la xidhiidha sida loola tacaalo waxyaabaha la xidhiidha dhaqanka iyo diimaha kala duwan.
Dhacdooyinka ay la kulmeen sadexda qof ayaa kala dhacay marar kala duwan, waxaa mid ka mid ah ay dhacday bishii July ee sannadkii 2016-kii, xilligaas oo qoys Muslimiin ah laga saaray duulimaadka shirkadda Delta.
Shaqaalahan katirsan Delta ayaa sheegay in uu arkay qof ka mid ah dadkaas oo telefoonkiisa gacanta ku qoray farriin ay ka muuqato magaca Alle, taasina ay shaki badan ku beertay.
Gabadhii shaqaalaha ahayd ayaa arrinti ku wargelisay kabtanka diyaaradda, wuxuu isna ku wargeliyay qeybta ammaanka qaabilsan.
Haseyeeshee mas’uuliyiintii qaabilsanaa ammaanka shirkadda diyaaradda ayaa sheegya in dadkaas ay yihiin kuwa u dhashay Mareykanka, aysanna jirin sabab looga argagaxo, balse kaptankii ayaa diiday in ay raacaan diyaaradda, kana soo saaray gudaha diyaaradda laba qof oo Muslimiin ahaa ee wada socday.
Dembiga kale ee loo heysta Delta ayaa dhacay shan maalmood ka hor go’aanka gudidga, wuxuuna ka dhacay Magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands.